कपाल झर्ने समस्या छ ? पीआरपी विधि हुन सक्छ समाधान
मानिसमा व्यक्तित्व र सुन्दरताको कुरा आउनसाथ कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । कपाल झर्नाले कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा बढी उमेरको देखिने गर्दछ ।
कपाल झर्ने समस्याबाट हजारौँ मानिस प्रभावित छन् र कपाल झार्नुको धेरै कारणहरु छन् । यद्धपि, कपाल झर्ने धेरै समस्याहरु डराउनु पर्ने र जीवनलाई नै खतरामा पार्ने किसिमको हुँदैनन् । कपाल झर्नाले अनावश्यक मानसिक तनाव लिने व्यक्तिलाई धेरै दुःख दिन सक्छ। यदि कुनै व्यक्तिले उनको महत्वपूर्ण कपाल झर्ने समस्या छ भन्ने सोच्दछ भने, उसलाई कपाल झर्ने कारण निर्धारित गर्नका लागि राम्ररी मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। यदि त्यहाँ अन्तर्निहित कारणहरू छन् भने, तिनीहरूलाई उचित रूपमा उपचार गर्न आवश्यक छ।
जो कोहिले पनि कपाल झरेको अनुभव गर्न सक्दछ तर यो समस्या पुरुषहरुमा बढी सामान्य छ । केही मानिसहरुले कपाल झर्ने समस्यालाई वेवास्ता गर्ने पनि गर्दछन् । केहीले यसलाई हेयरस्टाईल, श्रृंगार, टोपी वा स्कार्फले ढाक्ने गर्दछन भने धेरैले केश झर्ने रोक्नको लागि र पुनर्स्थापित गर्नका लागि उपलब्ध उपचारहरू मध्ये एक छनौट गर्दछन् ।
पीआरपी थेरापी कपाल झर्नेको लागि उपचार विधिहरूमध्ये एक हो । पीआरपी प्लेटलेटयुक्त प्लाज्मा हो जुन हाम्रो आफ्नै रगतको एक तत्व हो । यो प्लाज्मा हाम्रो रगतको सेतो रगत कोष र रातो रगत कोष छुट्याएर प्राप्त हुन्छ । यस प्लाज्मामा विभिन्न पोषक युक्त बृद्धि गर्ने कारकहरू छन् जसले कपालको वृद्धिलाई मद्दत गर्दछ ।
पीआरपीले ईन्जेक्सन गरिएको ठाउमा कोषको वृद्धिलाई उत्तेजित गर्दछ साथै कुनै पनि प्रकारको रसायन वा विदेशी पदार्थहरू प्रयोग नगरी शरीरलाई प्राकृतिक तरिकाले निको पार्न मद्दत गर्दछ, । यसमा प्लाज्मा आफ्नै शरीरको प्रयोग गरिने भएको कारण शरीरमा कुनै पनि प्रकारको एलर्जीको सम्भावना हुँदैन ।
पीआरपी विधिले झरेको वा पातलिएको कपाल वृद्धि मात्र नभएर यसले छालाको बनावट सुधार गर्न, दागहरु हटाउन, घाउ निको पार्ने कार्यमा मद्दत पुर्याउन, डन्डिफोरको दागहरू सुधार गर्न, छालाका प्वालहरुको आकार न्यूनतम पार्न, स्वस्थ र चम्किलो छाला बनाउन मद्धत पुर्याउँदछ ।
कपाल झर्नेको लागि पीआरपीलाई पातलो कपाल भएको टाउकोको छाला क्षेत्रमा सिधा इन्जेक्सन गरिन्छ। विभिन्न अध्ययनले बताएअनुसार पीआरपी विधिले कपाल उम्रने सुक्ष्म प्वालाहरुलाई उत्तेजित गराउनुका साथै ती प्वालाहरुको घनत्व वृद्धि गर्दछ । साथै यसबाट कापाल मजबुत पनि हुने गर्दछ । यस विधिको बहुउपचार एकदेखि दुई महिनाको दूरीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ।
यद्यपि, यस एक उत्कृष्ट उपचार विकल्पको लागि सबैजना योग्य हुँदैनन् । अनियन्त्रित मधुमेह , रक्तश्राव विकारका बिरामीहरु , पातलो रगत भएका, प्रतीरक्षा क्षमता कमजोर भएका, गर्भवति महिला, आइसोट्रेटिनइनमा, अन्य केही औषधि प्रयोग गरि रहेका व्यक्तिहरुले यो विधि नापनाउन सल्लाह दिइन्छ ।
साथै, कपाल झर्ने सबै कारणहरू पीआरपीमार्फत् उपचार गर्न सकिँदैन। पीआरपी थेरापीमा जानुभन्दा पहिले कपाल झर्नुको कारणको मूल्याङ्कन गर्न डर्माटोलजिस्टसँग परामर्श लिनु पर्दछ ।
डा. तापन प्रधान
(डर्माटोलोजिस्ट- भेनस स्किन एण्ड हेयर ट्रान्स्प्लाण्ट क्लिनिक, विराटनगर)